အချစ်ရေး | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
Category Archives: အချစ်ရေး
RS တစ်ခုကို အတူတူဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သိပ်မကြာခင်ပြတ်စဲတော့မယ် ၊ ဒါမှဟုတ် ရေရှည်လက်တွဲသွားလို့မရနိင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လို အချက်တွေကနေသိသာနေပါသလဲ။ ကိုယ်ရော RS ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ်တွေ အတွဲရော ဘယ်လိုအတွဲမျိုးလဲ ဆိုတာသိရှိနိင်စေဖို့အတွက် ရေရှည် မတည်တံ့နိုင်တဲ့ အတွဲတွေရဲ့လက္ခဏာ တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
(၁) အနာဂတ် အတွက်တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး
ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ လိုချင်တဲ့အရာတွေက မတူညီကြဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်ခံယူထားတဲ့ ဘ၀တွေ၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေမယ်။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ အခြေအနေထိရောက်အောင် သွားနိင်ကြမယ့်သူတွေမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ခံယူချက်တွေ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံတွေတော်တော်များများဟာ ကိုယ်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေရင်သတိထားဖို့လိုပါပြီ။
တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက် ကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကို မဖန်တီးပေးနိင်ဘူး(သို့) ဖန်တီးမပေးဖြစ်ဘူး ဆိုရင် တစ်ယောက်ရင်ထဲမှာတစ်ယောက်ဟာ နေရာယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ် စွဲလမ်းကြတယ် ဆိုတာမှာ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ပေးတဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းတွေကလည်းအရေးပါလှပါတယ်။ အာ့လို တစ်ယောက်အတွက်တစ်ယောက်က ဘယ်လိုကြည်နူးမှုမျိုးမှမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် မကြာခင်ပြတ်စဲဖို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြီးပြည့်စုံတယ်၊ အေးချမ်းတယ် ၊နွေးထွေးတယ် စသည်ဖြင့်ခံစားရတာကြောင့်အချစ်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမခံစားရပဲ သူနဲ့ရှိနေရင် စိတ်ကျဉ်းကျပ်တယ်၊စိတ်ပင်ပန်းတယ်၊ ထိန်းချုပ်ရတာတွေများတယ်၊ လုံခြုံမှုမရှိဘူး နွေးထွေးမှုမရှိဘူးလို့ခံစားနေရရင် အဲ့ဒီလူနဲ့ရေရှည်မသွားနိင်ဘူးဆိုတာသိသာနေပါပြီ။
ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုမရှိရင်ပေါင်းဖက်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါ။ သူဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား သူဘယ်လောက် အောင်မြင်အောင်မြင် သူဘယ်လောက်ကောင်းအောင်နေနေ ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းမမြင်ပဲ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတယ်၊ သူ့ဘက်ကဘလည်း ထိုနည်း လည်းကောင်းပဲဆိုရင် ဘယ်လိုမှရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ သိပ်မကြာခင်မှာပြတ်စဲနိုင်ပါတယ်။
ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတဲ့အတွဲတွေအများကြီးရှိသော်ငြားလည်း ရန်ဖြစ်တိုင်းပြန်မချစ်ပဲ တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက်နစ်နစ်နာနာတွေပြောပြီး စိတ်နာကျင်ရတာတွေလည်းရှိတက်ကြပါတယ်။ ရန်တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွဲဟာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ သမီးရည်းစားဘ၀ကိုငြီးငွေ့လာတက်ပြီး တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် အချစ်လျော့ကာ ပိုပြီး ရင်ဘတ်ချင်းဝေးကွာသွားတက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မလျော့ရင်း မကြာခင်မှာပြတ်စဲသွားတက်ကြပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်များနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ရင်း….
တစ်တွဲနဲ့တစ်တွဲ ချစ်ပုံ ချစ်နည်းခြင်းမတူသလို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ RS ပုံစံတွေကလည်းမတူကြပါဘူး။ ကိုယ့်အတွဲမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ဘာမရှိလို့ဟိုဘက်တွဲမှာ ကတော့ဘယ်လိုတွေပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးတစ်ချို့သောသူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ အားကျမှုတွေ မနာလိုမှုတွေ ဖြစ်များလာပြီး ကိုယ်တိုင်တည်ဆောင်ထားတဲ့RS အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေပျက်ပြယ် တက်ပါတယ်။ ဆိုတော့စုံတွဲတိုင်း ရဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုပဲ မြင်ပြီး အားကျစိတ် မနာလိုစိတ်တွေမထားပဲ တကယ် အတုယူအားကျသင့်တဲ့စုံတွဲ ဖြစ်အောင်နေပါ။ တကယ်အားကျသင့်တဲ့စုံတွဲတွေဆိုတာ…
(၁) တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် သစ္စာရှိတယ်
RS တစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာပါပဲ။ သစ္စာ မရှိပဲ ဖောက်ပြန်ခြံခုံနေတဲ့ အတွဲတွေများ နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးရောက်ရောက် ကိုယ့်ထက် ဘယ်လောက်သာတဲ့သူပဲတွေ့တွေ့ မပြယ်သောမေတ္တာနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်မြတ်နိုးတာပါလိမ့်မယ်။
(၂) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေးစားတယ်
တစ်ယောက်လုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုအပေါ် တစ်ယောက်က အကောင်းမြင်ပေးပြီး ယုံကြည်ပေးခြင်းဟာ အားကျစရာပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပဲထောက်ပြနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
တစ်ယောက် ရဲ့ယုံကြည်ရာကို လိုက်ယုံကြည်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် ဖေးမကူညီပြီး ကြင်နာပေးတက်ကြတယ်။ ဥပမာ-ကားလမ်းဘေးမှာ လမ်းလျှောက်ရင် မိန်းကလေးကို အထဲဝင်ခိုင်းတာမျိုး၊ ကိုယ့်ကောင်လေးအလုပ်ရှုပ်နေလို့ စားရမှာမေ့နေတဲ့အခါ စားစရာလုပ်ပြီး လာပို့ပေးတာမျိုး ၊ ဒီလို အမူရာလေးတွေဟာ ငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ ကြင်နာမှုတွေပါ။ ဒီလိုတစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ကြင်နာတဲ့စုံတွေးလေးတွေဟာ ချစ်စရာကောင်းပြီး အားကျစရာလည်းကောင်းပါတယ်။
နှစ်ဦးသားရှေ့ဆက်ရမဲ့ ဘ၀ခရီး အတွက် စဉ်းစားထားတာတွေရှိတယ်။ ရည်ရွယ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းကို အကောင်ထည်ဖော်ပေးဖို့အတွက်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖေးမကူညီရင်း ဖြစ်မြောက်လာသည်ထိ လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ ကြိုးစားကြတယ်။
တွေ့ဆုံရန်ခက်ခဲတဲ့လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတွေဖန်တီးပြီး နေထိုင်ကြတယ်။ ရန်ဖြစ်ဒေါသတွေထွက်လည်း နောက်ဆုံးမခွဲနိုင်ပဲ တစ်ယောက်နားမှာပဲတစ်ယောက်ရပ်တည်ကြတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူဘာလိုအပ်နေလဲ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ အမြဲ အတွေးထဲမှာရှိပြီး ချက်ချင်းထလုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင်တောင် တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတက်ကြတယ်။
တစ်စုံတစ်ယာက်နဲ့သင်ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပေါ်ကအချက်တွေတိုင်း သင်တို့RS ဘ၀က ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် တစ်ခြားစုံတွဲတွေ တစ်ခြားဘ၀တွေကို ထိုင်အားကျနေစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်ပြီးပြည့်စုံပြီးလူတိုင်းအားကျသင့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့RSဘ၀ကို ရထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့RSဘ၀တွေကို တည်ဆောက်ပြီး လူတိုင်းတကယ်အားကျသင့်တဲ့စုံတွဲတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း…
လူတိုင်းဟာကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ RS တစ်ခုကို ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်ချင်တတ်ကြတာလူတိုင်းရဲ့သဘာဝပါ။ ဒါပင်မဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကြည့်တာတွေ အတ္တတွေကြောင့် တစ်ချို့RSတွေဟာကြည်နူးစရာတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ တကယ်ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့စုံတွဲတွေ မလုပ်ကြတဲ့ တည်မြဲနေတဲ့RSတစ်ခုကိုပျက်စီးစေတဲ့အရာတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
ပျော်ရွှင်သာယာနေကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲအများစုဟာ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် သစ္စာရှိရှိနဲ့မြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ဖို့ကလွဲရင် တစ်ယောက်ဆီကတစ်ယောက်တစ်ခြား လိုချင်တပ်မက်မှုတွေမျှော်လင့်ချက်တွေ မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ကောင်းစေချင်တိုးတတ်စေချင်တဲ့စိတ်အမြဲရှိတတ်ကြပေမဲ့တစ်ယောက်ဆီကတစ်ယောက် အကျိုးမြတ်ကို မျှော်လင့်တတ်ကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သူတွေဆိုတာတစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုကအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်ကြပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့စာရိတ္တတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုပြည့်ပြည့်၀၀ယုံကြည်ထားတတ်ကြသူတွေပါ။ တစ်ခါတလေ ချစ်စရာကောင်းအောင်သ၀န်တိုရုံမှတစ်ပါး တစ်ခြား စွပ်စွဲသမုတ်တာမျိုးနာကျင်ခံစားရအောင်မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
တကယ်ချစ်ပြီးပျော်နေရတဲ့အတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တကယ်လိုအပ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ တစ်ယောက်ကြောင့်တစ်ယောက် သိမ်ငယ်စေတာမျိုးအရှက်ကွဲစေတာမျိုး၊ မဖြစ်စေပဲတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မြင်တာနဲ့အေးချမ်း နေတတ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွဲတိုင်းဟာ တစ်ယောက်ကြောင့်တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမသိမ်ငယ်စေရပါဘူး။
RS တစ်ခုမှာသာယာဖို့ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အနိုင်ပိုင်းနေမှ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နိုင်နေမှမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းအောင်ကိုယ့်ချစ်သူကိုဆိုးလို့ရပေမဲ့စိတ်ထိခိုက်နာကျင်ရအောင်အနိုင်ပိုင်းတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲ့လိုအနိုင်ယူတာဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာတာကြောင့်ပျော်ရွှင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့စုံတွဲတွေဟာ မလုပ်ကြပါဘူး။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အလိုက်သိပြီးနားလည်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေရတဲ့စုံတွဲတိုင်းဟာ ကိုယ့်အတ္တကိုယ့်စိတ်ထက် ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဦးစားပေးတတ်ကြတာကြောင့် တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်အလိုက်မသိတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တာကို အတင်းကြီးတောင်းဆိုတာမျိုးတွေကို မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
ပျော်ရွှင်သာယာနေကြတဲ့ချစ်သူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တတွေ မာနတွေကို ခ၀ါချပြီး ချစ်ရသူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို အလေးပေးတတ်ကြသူမို့အချင်းချင်း ပိုမိုအချစ်တွေခိုင်မြဲလာပြီးပျော်ရွှင်လာတတ်ကြပါ… ဆိုတော့တကယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ RS ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ရင်အပေါ်ကအချက်တွေကိုမလုပ်သင့်ပါ လို့အကြံပြုရင်း…
ကိုယ့်ချစ်သူလက်ဖ၀ါးက ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ ဘာလဲသိချင်နေကြပြီမှတ်လား??ကဲ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ အတူတူဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြည့်ရှိတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက် လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ထားတာ၊တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပွေ့ဖက်ထားတာတွေဟာ နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေပါတယ်တဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်သလို ခံစားရတာ၊နေမကောင်းဖြစ်နေတာ၊၀မ်းနည်းအားငယ်နေတာစသဖြင့်စိတ်ခံစားချက်နာကျင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ချစ်သူလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတာက နာကျင်မှုကိုလျော့ပါးသွားစေပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန် ကိုယ့်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပေးထားတဲ့အခါ စိတ်နာကျင်မှုလည်းလျော့နည်းလာပြီး စိတ်လည်းပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်လာပါတယ်တဲ့။ဒါကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Goldstein ဆိုတဲ့ စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ဇနီးရင်သွေးလေးမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာ လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် စုံတွဲ ၂၀ ကျော်ကိုလည်း တစ်နှစ်ကျော်ကြာစမ်းသပ်ခဲ့ရာမှ အခုလို ချစ်သူဇနီးမယားလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပေးထားတာဟာ နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရမှုကိုလျော့နည်းသွားစေကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့အချိန်ဆို ကိုယ့်ချစ်သူလက်ကိုသာ ကိုင်ထားလိုက်ပါ။နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့အသက်ရှုနှုန်းဟာ အတူတူပဲဖြစ်နေတာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။တစ်ခဏကြာရင်တော့ စိတ်ပေါ့ပါးပြီးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတာတွေ့ရမှာပါ။တကယ်ပဲ နာကျင်မှုဝေဒနာလျော့ပါးစေလားဆိုတာစမ်းကြည့်ကြဦးနော်
ကိုယျ့ခဈြသူလကျဖဝါးက ဆေးတဈခှကျဖွဈနတေယျဆိုလို့ ဘာလဲသိခငျြနကွေပွီမှတျလား??ကဲ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ အတူတူဆကျဖတျကွညျ့လိုကျရအောငျ
သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့လလေ့ာခကျြအရ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှအေပွညျ့ရှိတဲ့ခဈြသူနှဈယောကျ လကျခငျြးဆုပျကိုငျထားတာ၊တဈယောကျကိုတဈယောကျပှဖေ့ကျထားတာတှဟော နာကငျြမှုကိုလြော့နညျးစပေါတယျတဲ့။ခန်ဓာကိုယျကိုကျခဲနာကငျြသလို ခံစားရတာ၊နမေကောငျးဖွဈနတော၊ဝမျးနညျးအားငယျနတောစသဖွငျ့စိတျခံစားခကျြနာကငျြနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ခဈြသူလကျကိုဆုပျကိုငျထားတာက နာကငျြမှုကိုလြော့ပါးသှားစပေါတယျ။
ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျစိတျမကောငျးဖွဈဝမျးနညျးနတေဲ့အခြိနျ ကိုယျ့လကျကိုဆုပျကိုငျပေးထားတဲ့အခါ စိတျနာကငျြမှုလညျးလြော့နညျးလာပွီး စိတျလညျးပိုပွီးသကျတောငျ့သကျသာဖွဈလာပါတယျတဲ့။ဒါကိုလလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ Goldstein ဆိုတဲ့ စိတျပညာရှငျတဈယောကျဟာ သူ့ဇနီးရငျသှေးလေးမှေးဖှားနတေဲ့အခြိနျ မှာ လကျကိုဆုပျကိုငျထားပွီးလကျတှစေ့မျးသပျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ စုံတှဲ ၂၀ ကြျောကိုလညျး တဈနှဈကြျောကွာစမျးသပျခဲ့ရာမှ အခုလို ခဈြသူဇနီးမယားလကျကိုဆုပျကိုငျပေးထားတာဟာ နာကငျြမှုဝဒေနာခံစားရမှုကိုလြော့နညျးသှားစကွေောငျးလလေ့ာတှရှေိ့လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ကဲ ဒီတော့နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျ၊စိတျထဲမှာဝမျးနညျးအားငယျနတေဲ့အခြိနျဆို ကိုယျ့ခဈြသူလကျကိုသာ ကိုငျထားလိုကျပါ။နှလုံးခုနျနှုနျးနဲ့အသကျရှုနှုနျးဟာ အတူတူပဲဖွဈနတောသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။တဈခဏကွာရငျတော့ စိတျပေါ့ပါးပွီးနလေို့ထိုငျလို့ကောငျးသှားတာတှရေ့မှာပါ။တကယျပဲ နာကငျြမှုဝဒေနာလြော့ပါးစလေားဆိုတာစမျးကွညျ့ကွဦးနျော
ရည်းစားရှိမှန်းသိရဲ့  ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လာနွယ်နေတဲ့ အယွလေးတွေကို ဘယ်လိုချေမလဲ
ရည်းစားရှိမှန်းသိရဲ့ နဲ့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းပတ်သတ်ချင်တဲ့ လူလေးတွေရှိပါတယ်။
သိရသလောက်တော့ ယောက်ျားလေးတွေထက် မိန်းကလေးတွေက ပိုပတ်သတ်ချင်စိတ်များ သတဲ့။ ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ ဒီမိန်းကလေးမှာ ရည်းစားရှိတယ်ဆိုရင် ရှောင်ကြတာများပါတယ်။
ဒါက မိန်းကလေးတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ က ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိပါတယ်။ ငါ့ရည်းစားကိုသာ အဲ့လိုလာလုပ်ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ ။ တချို့ မိန်းကလေးတွေကျ သူတို့ ဒီယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို သဘောကျတယ်.. ဒါပေမယ့် ရည်းစားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးက သူ့ကိုရှိန်သွားစေပေမယ့်
ဒီကောင်လေးရဲ့အချစ်ရေးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနေတစ်ဆင့် တိတ်တဆိတ် စောင့်ကြည့်နေတတ်တယ်။ တွဲတာ ကြာပြီလား.. အဆင်ရောပြေရဲ့လား…ဘာညာပေါ့။
ဒီတော့ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့အကျင့် စရိုက်ဘယ်လိုမျိုးလဲ … အများစုမှာ တွေ့ရသလောက်ကတော့
မင်းရည်းစားနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆို သူတို့အတွက် ဂွင်ပါပဲ။ ပြဿနာဖြစ်လို့ နည်းနည်းလေး ရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူသာဆို ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်မယ် ၊ မေတ္တာအပြည့်ဝပေးနိုင်မယ့် မိခင်နီးပါးလို ၊ အားပေးစကားတွေ ခြွေချပါလိမ့်မယ်။ ဝမ်းနည်းနေတာအကြောင်းပြပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက် အရက်တူသောက်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ယောက်ျားသားများရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေတုန်းခဏ ရူးမိုက်လိုက်တဲ့လုပ်ရပ်က ပါဝင်ပတ်သတ်သူအားလုံးကို နာကျင်စေပါတယ်။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှမြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ယောက်ျားလေးဘက်က စိတ်မပါရင် ဒီဟာမလေးတွေ အရူးမသာသာပါပဲ
တကယ်လို့များ.. ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် ရိသဲ့သဲ့စကားလာပြောနေတယ် ၊ ပတ်သတ်နေတဲ့သူတွေရှိရင်
သွားပြီး မဖြဲပါနဲ့။ အေးဆေးနေပါ။ သူတို့ကသာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်အရင်စကားလာပြောပါလိမ့်မယ်။
အဓိက မင်းရဲ့ကောင်လေးစိတ်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ” ကြိုက်ရင် ယူလိုက် ” လို့သာ တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်။ ခပ်ချေချေပဲနော်။ အပေါ်စီးကနေသာ ဆက်ဆံပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ ရောလိုက်ရင် မင်းခေါင်းပေါ် တက်ထိုင်သွားမယ့်သူတွေချည်းပဲ ။ ကိုယ့်တန်ဖိုးနားလည်ရင် မင်းကောင်လေး မင်းနဲ့အတူကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်။ သူနဲ့ ထိုက်တန်ရင် သူ့နောက်ပါသွားလိမ့်မယ်.. ဒီအတွက် ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ အသဲကွဲတာ ခဏပါ။ ကိုယ့်အတွက် မမှန်ကန်တဲ့လူနဲ့ နေပြီး တစ်သက်လုံးစိတ်ညစ်မယ့်အစား အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ပြီး ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။
အမျိုးသားများအတွက် အိမ်တွင်းလုပ် သဘာဝအားဆေး
လိင်ကိစ္စမှာ ယောင်္ကျားလေများ စိတ်မပါတတ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စာပို့ပြီး ချိန်းဆိုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၉)ခု